August 26, 2020 763
हरेक मानिसको सौन्दर्य’तामा उसको कपाल महत्व’पुर्ण मानिन्छ । कपाले मानिसको सुन्द’रतामा निखार ल्याउँछ । त्यसैले मानि’सले कपाललाई महत्वपुर्ण मानेर यसको देखभाल र स’म्भार गर्छन् । तर कपालको काम सौन्र्दयतासंग मात्र जोडिएको छैन । कपालले तपाईको शरीरमा कुन भिटामिनको अभाव छ त्यसबारे स’मेत जानका’री दिन्छ ।
मेटापोलि’ज्मदेखि डीएनएको प्रतिरूप र रातो रक्त कोशिका’को गठनसहित शरीरको आवश्यक प्रक्रिया’मा भिटामिन बी १२ को आवश्यकता हुन्छ । यस भिटामिनको अभावका कारण शरीरमा अनेकौं लक्षण र विकार देखापर्दछ । त्यसम’ध्ये कपाल झर्ने सम’स्या पनि एक हो ।
भिटा’मिन बी १२ जसको अभा’वले कपाल झर्छ
हरेक मानि’सको सौन्दर्यतामा उसको कपाल महत्व’पुर्ण मानिन्छ । कपाले मानिसको सुन्द’रतामा निखार ल्याउँछ । त्यसैले मानिसले कपाललाई महत्वपुर्ण मानेर यसको देखभाल र सम्भार गर्छन् । तर कपालको काम सौन्र्दयतासंग मात्र जोडिएको छैन । कपा’लले तपाईको शरीरमा कुन भिटा’मिनको अभाव छ त्यसबारे समेत जानकारी दिन्छ ।
मेटापोलि’ज्मदेखि डीएनएको प्रतिरूप र रातो रक्त कोशि’काको गठनसहित शरीरको आवश्यक प्रक्रियामा भिटामिन बी १२ को आवश्यकता हुन्छ । यस भिटा’मिनको अभावका कारण शरीरमा अनेकौं लक्षण र विकार देखा’पर्दछ । त्यसमध्ये क’पाल झर्ने समस्या पनि एक हो ।
कमजो’री, मुटुको धड्कन तेज हुनु, छाला पहेंलो हुनु, आखाँ कमजोर हुनु लगाय’तका लक्षणले शरीरमा पर्याप्त मा’त्रामा भिटामिन बी १२ नपुगेको संकेत गर्दछ ।
भिटा’मिन बी १२ को कमीका कार’णले सबैभन्दा बढि असर रगत, गैस्ट्रोइन्टेस्टाइनल वातन्त्रिकातन्त्रमा पार्दछ । यस अलावा भिटामिन बी १२ को अभावले कपाल झर्ने समस्या समेत देखापार्दछ ।
भिटामिन बी १२ को कमीले कसरी झर्छ कपाल?
कपाल’मा केराटिन प्रोटिन पाइन्छ । कपालको सबै’भन्दा मुनिको भाग हेयर फोलिसेसको जराको कोशिका शरीरमा सबैभन्दा छिटो बढ्ने गर्दछ । यो हरेक २३ देखि ७२ घण्टामा बढ्ने गर्दछ ।
टाउन’कोमा हुने रोमछि’द्रको जरामा पैपिला प्राप्त हुन्छ । जसमा रक्त वाहिका हुने गर्दछ । पैपिलाको मुख्य काम कपालको विकास गर्न आवश्यक पर्ने अक्सि’जन र पोषक तत्व’लाई रक्त कोशि’कामा जोड्नु हो ।
भिटामिन बी १२ रातो रक्त को’शिका उत्पाद’नगर्न मद्दत गर्दछ । तसर्थ कपालको विकासकालागी शरीरमा पर्याप्त मात्रामा भिटामिन बि १२ हुनु आवश्यक छ । अन्य’था कपाल झर्ने समस्या हुने गर्दछ ।
खबरहब बाट हिजो
Prevके तपईंलाई कब्जियत छ ? ठीक बनाउने ७ घरेलु उपाय
Nextदेशलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउने कुलमानको आफ्नै कहानी ( भिडियो हेर्नुहोस् )
आज कुन जिल्लामा कति जना संक्रमित भेटिए ? हेर्नुहोस् विवरण सहित